June 2018 – Heal Zimbabwe Trust
Heal Zimbabwe welcomes the historic signing of the peace pledge by political parties ahead of the 2018 elections. The peace pledge signing arrangement was brokered by the National Peace and…
Continue Reading Heal Zimbabwe hails NPRC for Peace pledge initiative
On 23 June 2018 Heal Zimbabwe in collaboration with the Election Resource Centre and the Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) launched the “Go out and Vote campaign” in Epworth. The objective…
Continue Reading Go out and Vote campaign launched in Epworth ….as aspiring candidates’ pledge for peace
Post Category:Latest News / Statements
Heal Zimbabwe joins the rest of the world in commemorating International Day in support of Victims of Torture. The United Nations International Day in Support of Victims of Torture on…
Continue Reading Heal Zimbabwe Statement on International Day in Support of Victims of Torture
Community structures established by communities that work with Heal Zimbabwe in Zaka, Bikita and Gutu (Masvingo Province) have implored political parties (ZANU PF and MDC-T) to exercise political tolerance and…
Continue Reading Community members from Masvingo castigate political parties for violent primary elections……. vow to intensify peace campaigns ahead of elections
Heal Zimbabwe joins the rest of Africa in commemorating the Day of the African Child. The day celebrated every year on 16 June, was set aside to remember the young people of…
Continue Reading Heal Zimbabwe statement on the Day of the African Child.
Continue Reading Heal Zimbabwe commends the JSC for designating trial magistrates for politically motivated violence and intimidation cases ahead of elections.